Ho ahy, ity boky ity dia nanomboka tamin'ny taona 2005, fony aho niasa eo amin'ny dissertation. Aho fanandramana nihazakazaka an-tserasera, izay hilaza aminao aho ny momba izay rehetra tao amin'ny Toko faha 4, fa ankehitriny handeha aho mba hilaza zavatra izay tsy ao amin'ny taratasy misy akademika. Ary, fa zavatra izay ifotony niova ny fomba mieritreritra momba ny fikarohana aho. Indray maraina, rehefa avy amin'ny teny anglisy ny tranonkala-mpizara, dia nahita fa nandritra ny alina tokony ho 100 ny olona avy any Brezila dia nandray anjara tamin'ny fanandramana. Izany toe-javatra Nisy vokany lalina teo amiko. Tamin'izany fotoana izany, dia nanana namana izay nihazakazaka nentim-paharazana laboratoara fanandramana, ary fantatro ny fomba sarotra dia voatery niasa handray, hanara-maso, ary mandoa ny olona mba handray anjara amin'ny fanandramana; raha toa ka afaka mihazakazaka 10 ny olona ao anatin'ny iray andro, izay tsara fandrosoana. Kanefa, miaraka amin'ny aterineto andrana, 100 ny olona nandray anjara raha mbola natory. Manao ny fikarohana raha matory ianao dia mety ho toa tsara loatra ho marina, fa tsy. Fiovana eo amin'ny teknolojia-manokana ny tetezamita avy amin'ny Analog taona ny nomerika mandrakizay-midika fa afaka hanangona ary hadihadiana izao angon-drakitra ara-tsosialy ao amin'ny fomba vaovao. Ity boky ity dia nanao fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny fomba vaovao ireo.
Ity boky ity dia ho an'ny fiaraha-monina roa samy hafa. Izany dia ho an'ny mpahay siansa ara-tsosialy izay te-hanao bebe kokoa angona siansa, ary izany koa no angon-drakitra mpahay siansa izay te-hanao bebe kokoa ny siansa ara-tsosialy. I mandany fotoana amin'ny vondrom-piarahamonina roa ireo, ary ity boky ity no ezaka hitondra ny heviny miaraka amin'ny fomba izay Misoroka ny quirks sy ny teny teknika ny na. Noho ny fiaraha-monina fa ity boky ity dia ho an'ny, dia tokony handeha tsy nilaza fa ity boky ity dia tsy natao ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Efa niasa ny sasany ao amin'ny governemanta (amin'ny Birao Fanisam-bahoaka Amerikana) sy ny teknolojia orinasa (amin'ny Microsoft Research), ary fantatro fa misy maro ny fikarohana mampientam-po mitranga any ivelany ny oniversite. Noho izany, raha mieritreritra ny zavatra ara-tsosialy manao toy ny fikarohana, dia ity boky ity no ho anareo, na aiza na aiza no miasa na inona no karazana teknika ampiasaina anao amin'izao fotoana izao.
Isika dia mbola tany am-piandohan ny fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny taona nomerika, ary nahita aho fa ny sasany tsy fifankahazoana dia tena fototra ary fahita fa mahatonga ny tena heviny ho ahy ny hiresaka azy eto, ao amin'ny teny fampidirana. Avy amin'ny angon-drakitra mpahay siansa, aho nahita fahita roa tsy fifankazahoan-kevitra. Ny voalohany dia mieritreritra fa ho azy kokoa ny angona mamaha olana. Kanefa, satria fikarohana ara-tsosialy izay tsy ny zavatra niainako. Raha ny marina, ho an'ny fiaraha-monina vaovao fikarohana karazana tahirin-kevitra, izay mifanohitra amin'ny bebe kokoa amin'ny angon-drakitra izany, toa ka tena nanampy. Ny faharoa fahazoana izay hitako avy amin'ny angon-drakitra mpahay siansa no mihevitra fa ara-tsosialy siansa fotsiny bunch ny mihaja-lahateny mifono manodidina ny fahaiza. Mazava ho azy, toy ny mpahay siansa ara-tsosialy-kokoa manokana toy ny mpahay fiarahamonina-Tsy manaiky izany; Heveriko fa ny siansa ara-tsosialy dia manana be dia be mba hanatitra. Smart ny olona no miasa mafy mba hahatakatra ny fihetsiky ny olombelona nandritra ny fotoana ela, ary toa fahendrena ny tsy miraharaha ny fahendrena izay efa voangony avy amin'io ezaka. Ny manantena fa ity boky ity dia hanolotra anareo ny sasany fa ny fahendrena dia amin'ny fomba izay dia mora ny mahatakatra.
Avy mpahay siansa ara-tsosialy, ihany koa aho nahita fahita roa tsy fifankazahoan-kevitra. Voalohany, aho nahita ny olona sasany manoratra-eny ny fiaraha-monina manontolo fikarohana hevitra ny fampiasana ny fitaovana nomerika ny taona vitsivitsy mifototra amin'ny taratasy ratsy. Raha mamaky ity boky ity, angamba ianao efa namaky ny bunch ny taratasy izay tahirin-kevitra haino aman-jery sosialy mampiasa amin'ny fomba izay banal na diso (na izy roa). Koa aho. Na izany aza, dia ho fahadisoana lehibe ny hanatsoaka hevitra avy amin'ireo ohatra ireo fa ny fiaraha-monina rehetra taona nomerika fikarohana ratsy. Raha ny marina, ianao koa angamba namaky ny bunch ny taratasy izay mampiasa Ny valin'ny fandinihana natao amin'ny fomba izay banal na ratsy, nefa tsy hanoratra-eny fikarohana rehetra mampiasa fanadihadiana. Izany satria fantatrareo fa dia be ny fikarohana atao amin'ny valin'ny fandinihana natao, ary ao amin'ity boky ity, aho handeha hasehoko anao fa misy ihany koa ny fikarohana lehibe atao ny fitaovana nomerika ny taona.
Ny faharoa iombonana fahazoana izay hitako avy ny mpahay siansa ara-tsosialy dia ny hampifangaro ny ankehitriny sy ny ho avy. Rehefa fikarohana fanombanana ara-tsosialy ao amin'ny nomerika mandrakizay ny fikarohana izay aho handeha mba hilazana ao amin'ity boky ity-dia zava-dehibe ny fanavahana roa manontany fanontaniana:
Inona no tsara manao izany fomba asa fikarohana izao?
Ahoana tsara no izany fomba fikarohana asa amin'ny ho avy ho toy ny antontan-kevitra tontolo miova sy toy ny mpikaroka manokana ny saina bebe kokoa ny zava-manahirana ireo?
Na dia ny mpikaroka no nampiofanina mba hamaliana ny fanontaniana voalohany, fa ity boky ity, mihevitra aho fa ny fanontaniana faharoa no zava-dehibe kokoa. Izany hoe, na dia ara-tsosialy fikarohana ao amin'ny vanim-potoana nomerika tsy mbola namokatra goavana, modelim-hanova fanomezana ara-tsaina, ny tahan'ny ny fanatsarana ny taona nomerika fikarohana dia mampino haingana. Io tahan'ny ny fiovana, mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao ambaratonga, izay mahatonga nomerika taona fikarohana mahaliana ahy izany.
Na dia izany andalana farany toa mba hanolotra anareo harena mety amin'ny sasany ny fotoana voafaritra amin'ny hoavy, ny tanjona ato amin'ity boky ity dia tsy mba mivarotra anareo amin'ny karazana manokana ny fikarohana. I tsy manokana ny anjara amin'ny Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple na hafa teknolojia orinasa (na, noho ny famborahana tanteraka, no niasa tao amin'ny fikarohana na nahazo famatsiam-bola avy amin'ny Microsoft, Google, sy Facebook). Raha faly amin'ny fikarohana fa efa manao: lehibe, foana manao ny zavatra ataonareo. Fa, raha mahazo an-tsaina fa ny vanim-potoana nomerika dia midika fa ny vaovao sy ny zavatra hafa azo atao, dia te-hampiseho aminao ireo azo atao. Noho izany, manerana ny boky ny tanjona dia ny hijanona ho azo itokisana mpitantara, milaza aminareo ny momba ny zavatra vaovao mampientam-po izay azo atao, raha mitarika anao amin'ny fandrika vitsivitsy izay efa nahita ny hafa latsaka ao. Manantena aho fa hanampy hanatsara ny fikarohana, ary hanampy anao handinika tsara kokoa ny fikarohana ny olon-kafa.
Rehefa mety ho nahatsikaritra sahady, ny fihetseham-po ity boky ity dia somary tsy mitovy amin'ny boky fianarana hafa. Izany no fanahy iniana. Ity boky ity nahazo diplaoma nivoaka avy amin'ny seminera izay efa nampianatra tao Princeton ao amin'ny departementan'i l'bola ary, ka tiako ity boky ity mba hisambotra ny sasany amin'ireo ny hery sy fientanam-po avy ny seminera. Indrindra indrindra, tiako io boky io mba hanana toetra telo: manampy, be fanantenana, sy ny ho avy-mirona.
Helpful: Ny tanjona dia ny hanoratra ny boky izay manampy ho anareo. Noho izany, handeha aho ny hanoratra amin'ny misokatra sy ny tsy ara-potoana fomba. Izany satria zava-dehibe indrindra izay te-hampita dia nisy fomba mieritreritra ny fiaraha-monina fikarohana. Ary, ny traikefa amin'ny fampianarana maneho fa ny fomba tsara indrindra mba hampitana fomba fisainana izany dia tsy ara-potoana sy ny maro ny ohatra.
Fanantenana: Ny vondrom-piarahamonina roa fa ity boky ity Manao-ara-tsosialy sy ny tahirin-kevitra ny mpahay siansa ny mpahay siansa-manana fomba tena samy hafa. Data ny mpahay siansa amin'ny ankapobeny faly; Matetika izy ireo hahita ny fitaratra tahaka ny antsasaky feno. Mpahay siansa ara-tsosialy, amin'ny lafiny iray hafa, amin'ny ankapobeny kokoa ny fanakianana; Matetika izy ireo hahita ny fitaratra tahaka ny antsasaky foana. Ato amin'ity boky ity, aho handeha hanaraka ny fanantenana feo ny angon-drakitra siansa, na dia ny fiofanana dia toy ny mpahay siansa ara-tsosialy. Noho izany, rehefa manolotra ohatra, aho handeha hambarako anareo izay tiako momba ireo ohatra. Ary, raha manao manasongadina ny olana miaraka amin'ny ohatra, ary Izaho kosa haneho izany satria tsy misy fikarohana tanteraka-I'm handeha miezaka hanondro olana ireny amin'ny fomba tsara sy ny fanantenana dia. Tsy handeha aho ho mitsikera noho ny be fanakianana. I Handeha ho manakiana mba hahafahako hanampy anao mamorona fikarohana tsara tarehy kokoa.
Future mitodika: Manantena aho fa ity boky ity hanampy anao hanao fikarohana ara-tsosialy fampiasana ny nomerika rafitra izay misy ankehitriny sy ny nomerika ny rafitra izay noforonina ho amin'ny ho avy. Nanomboka nanao izany karazana fikarohana tamin'ny 2003, ary nanomboka dia efa nahita be dia be ny fiovana. Tadidiko fa tamin'izaho tany an-tsekoly ny olona nahazo diplaoma dia tena faly ny MySpace ho an'ny fiaraha-monina mampiasa fikarohana. Ary, rehefa nampianatra ny kilasy voalohany amin'ny izay dia antsoina hoe "tranonkala mifototra amin'ny fikarohana fiaraha-monina," ny olona dia tena faly ny tontolo virtoaly toy ny SecondLife. Azoko antoka fa amin'ny hoavy ankamaroan'ny zavatra miresaka momba ny olona amin'izao fotoana izao dia toa adaladala sy lany andro. Ny fitaka ho nitoetra manan-danja eo amin'ny manoloana ny fiovana haingana io dia abstraction. Noho izany, izany dia tsy handeha ho boky izay mampianatra anao tsara ny fomba fampiasana ny Twitter API; fa, dia handeha ho boky izay mampianatra anao ny fomba ianarana avy nomerika soritra (Chapter 2). Tsy mandeha ho boky iray izay manome anao dingana-by-dingana toromarika ho an'ny nihazakazaka fanandramana amin'ny Amazon Mechanical Turk; fa, dia handeha hampianatra anao ny fomba hanao ny mari sy handika fanandramana izay miantehitra amin'ny taona nomerika foto-drafitrasa (Chapter 4). Amin'ny alalan'ny fampiasana ny abstraction, Manantena aho fa ho boky tsy mety lany andro amin'ny lohahevitra ara-potoana.
Mino aho fa izao no fotoana mampientanentana indrindra hatramin'izay mba ho fiaraha-monina mpikaroka, ary handeha aho mba hiezaka hampita ny fientanentanana amin'ny fomba izay mazava. Izany hoe, tonga ny fotoana mba hifindra mihoatra noho manjavozavo generalities momba ny herin'ny maizina ny herin 'ny tahirin-kevitra vaovao. Izany dia fotoana voafaritra tsara ny mahazo.